जेसीज कप फुटवलमा सर्वाधिक गोलकर्ता को बन्ला ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर खेल समाचार जेसीज कप फुटवलमा सर्वाधिक गोलकर्ता को बन्ला ?
जेसीज कप फुटवलमा सर्वाधिक गोलकर्ता को बन्ला ?
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार २२:३५
म्याग्दी जेसिजद्धारा आयोजित अन्तरमावि नरेश मोवाईल १८ औँ जेसीज कप फुटवल प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ता को बन्ला ? सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेका विद्यालयका केही गोलकर्ताको विषयले समेत चर्चा पाउन थालेको छ । बिहिबार क्वाटरफाइनलका खेल सकिएसँगै हालसम्मका खेलमा धेरै गोल गर्ने खेलाडीहरू आवद्ध भएका विद्यालय नै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । एउटै खेलमा गोल पोष्टमा गोलको बर्षा गरेकाले पनि विगतका प्रतियोगितामा भन्दा यसपटक निकै रोचक देखिएको छ ।
सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका खेलाडीहरुमा टिममा विद्यालयले आशा गरेका खेलाडीहरु नै गोलकर्ताको सूचीमा फ्रन्टमा देखिएका छन् जारी जेसीज फुटबल प्रतियोगिताको बिहिबारसम्मको तथ्यांक अनुसार बेनी आवासीय माविका सन्तोष छन्त्याल गोलकर्ताको सूचीमा अगाडि छन् । उनले लिटल गार्डेन एकेडेमीलाई ४ गोल र म्याग्दी एकेडेमी सिंगालाई ३ गोल प्रहार गरेका थिए ।छन्त्याललाई न्यू्र वेष्ट पोइन्ट आवासीय माविका मनिष श्रेष्ठले पच्छाउँदै छन् ।
उनले गौ बमबस्त मावि ५ गोल र भिम मावि देविस्थानलाई १ गोल गरेका छन् । छन्त्याल र श्रेष्ठ सहभागी विद्यालयको भेट सेमिफाइनलमा हुने छ । सेमिफाइनलमा छन्त्यालसँग बराबरी गर्न कम्तिमा श्रेष्ठले एक गोल गर्नुपर्छ भने छन्त्यालले थप गोल गरेमा उनलाई राहत हुने छ । श्रेष्ठसँगै बेनी सामुदायिक माविका विजय छिनाल गोलकर्ताको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन् । छिनालले बालमन्दिर आधारभुत विद्यालयलाई ३ गोल र लोकदिप आवासीय माविलाई १ गोल, जनप्रिय मावि दरबाङलाई २ गोल गरेका थिए ।
सदरमुकाम बेनी बाहिरको विद्यालयमा उत्कृष्ट मानिएको जनप्रिय माविलाई सेमिफाइनल प्रवेशमा रोक्न छिनालले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । छिनालले सेमिफाइनलमा बुद्धसँगको खेलमा क्वाटरफाइनलमै जस्तै खेललाई सदुपयोग गर्न सकेमा सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा पुग्ने बाटो सहज देखिन्छ ।
यता बुद्ध एकेडेमीका निराजन पुन गोलकर्ताको सूचीमा चौथो स्थानमा छन् । महादेव मावि बेगलाई ४ गोल र माउण्ट एभरेष्ट आवासीय माविलाई १ गोल गरेका छन् । माउण्ट एभेरष्टसँगको खेलमा पुनको गोल नै निर्णायक बन्यो जसले बुद्धको क्वाटरफाइनलको यात्रालाई सुरक्षित गरेको थियो। शुक्रबार सम्पन्न हुने खेलमा सर्वाधिक गोलकर्ताको अनुमान गर्ने सकिन्छ । अन्य उत्कृष्ट विधाहरुमध्ये यो विधामा जित्ने खेलाडीहरुको खेल जीवनमा धेरै ठूलो अर्थ हुने भएकाले पनि निकै चासो पूर्वक हेरिएको छ ।
सर्वाधिक गोलकर्तालाई नगद पुरस्कार कम भएपनि टाइटलको सन्देश ठूलो भएको म्याग्दी जेसीजका अध्यक्ष खम थापा मगरले बताए । प्रतियोगितामा विजेतालई ट्रफि, मेडल, प्रमाण–पत्रसहित ५१ हजार र उपविजेतलाई ट्रफि, मेडल, प्रमाण–पत्रसहित ३१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार रहेको छ। अनुशासित टिमलाई सात हजार ७७७ रुपैया रहेको छ।